Wasaaradaha internetka - Waxa laga filayo markaad na soo booqatid
Waxa aad filaneyso markaad na soo booqaneyso
Tani waa waxa aad filan karto markaad na soo booqaneyso.
Salaadda: Inta lagu jiro adeegga cibaadada dhowr ka mid ah nimanku waxay hoggaamin doonaan shirka kaniisadaha dadweynaha.
Oo waxay ku sii adkaysteen rasuulladu waxay bari jireen iyo xidhiidhka ka dhexeeyey iyaga, iyo kibista jebinteeda iyo tukasho.
Heesidda: Waxaan u heesi doonaa dhowr heeso, isla markaana isku dareeno, oo ay hoggaamiyaan hal ama dhowr madax ah. Kuwaas waxaa lagu heesayaa capella (iyada oo aan la soconin qalabka muusikada). Waxaan u heeseynaa habkan maxaa yeelay waxay raacaysaa qaabka kaniisaddii ugu horreysay ee kaniisadaa oo tani waa nooca muusikada oo keliya ee lagu oggolaaday Axdiga Cusub ee cibaadada.
Efesos 5: 19 "midba midka kale ayuu kaga hadlaa Sabuurrada iyo heeso iyo heeso ruuxi ah, oo heeso iyo heeso qalbigaaga ku leh Rabbiga,"
Cashada Rabbiga: Waxaan ka qayb qaadanaa Cashada Rabbiga maalin kasta, ka dib qaabka kaniisaddii qarnigii koobaad.
Maalintii ugu horraysay ee toddobaadka, oo ay isu yimaadeen, waxay ku yidhaahdeen, Bawlosow, diyaar baan u ahay inaan tago oo aan afgembiyo; habeenkiina waa la hadlay.
Ka qayb qaadashada Cashada Rabbiga waxaannu xusuusanaa dhimashada Rabbiga ilaa uu mar kale yimaado.
SABUURRADII KORINTOS 13 Xagga Rabbiga ayaan ka helay wixii aan idiin dhiibay, taasoo ah habeenkii Ciise qudhiisu uu gacmihiisa saqafka u qabtay, oo markuu ku mahad naqay ayuu jejebiyey oo yidhi, Qaado oo cun. Tanu waa jidhkaygii laydiin jejebiyey, Sidaas oo kalena cashada dabadeed ayuu qaaday koobkii, isagoo leh, Koobkanu waa axdiga cusub ee dhiiggayga. Tan u sameeya sidaan u cabbi lahaa iyo in kale, maxaa yeelay, mar alla markaad kibistan cuntaan oo aad koobkan cabtaan, waxaad muujinaysaan dhimashada Rabbiga ilaa uu yimaado.
Siinta: Waxaannu ku deeqnaa deeqda shaqada kaniisadda maalin kasta ee ugu horreysa toddobaadka, iyagoo ogaanaya in Ilaah si hodan ah nooga barakeeyey mid kasta oo naga mid ah. Kaniisaddu waxay taageertaa shaqooyin badan oo wanaagsan oo u baahan taageero dhaqaale.
Maalinta ugu horraysa ee toddobaadka midkiin kastaa meel wax ha dhigo oo ha hayo wixii lagu barwaaqeeyey, Waayo, wax aan waxba ahayn ma arki doontaan.
Daraasadda Baybalka: Waxaan ku baranaa barashada Kitaabka Quduuska ah, ugu horrayn annagoo ku wacdinnay ereyga, laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo akhriska Kitaabka Quduuska ah iyo waxbarida tooska ah
SABUURRADII - 2-4 "Haddaba waxaan idinku amrayaa inaad Ilaah iyo Ciise Masiix indhihiinnu xukumaan kuwa nool iyo kuwa dhintayba Sayidka Ilaah ah iyo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix aawadiis, idinkoo ku dadaalaya isku dadaalkii aad igu aragteen oo dhan. Iska jir oo xumaan ha u barooran doono.
Marka lagu jiro khadka wacdinta, martiqaad ayaa loo kordhin doonaa qof kasta oo doonaya in uu ka jawaabo. Si aad u ogaato wax badan oo kusaabsan masiixiyadda, inaad noqotid Christian ama aad weydiisato salaada kaniisadda, fadlan u baahi baahidaada.
Adeega cibaadada waxaa loo tixgeliyaa dhaqanka kaniisadaha Masiixa. Ma aha mid casri ah ama qalab. Waxaan ku dadaalnaa inaan u caabudno xagga Ruuxa iyo runta.
Ilaah waa Ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta. "